King Arthur: Legend of the Sword – Myanmar Subtitles
Genre: Action, Adventure, Drama, Fantasy Director: Guy Ritchie Actors: Astrid Bergès-Frisbey, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Jude Law Country: UK, USA Released: 12 May 2017 Score: 6.7 Duration: 126 min Quality: Bluray 1080p Years: 2017 View: 2,289
ဇာတ်လမ်းကျောရိုးက အင်္ဂလန်သမိုင်းကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားပြီး အင်္ဂလန်ရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး ပုံပြင်တွေထဲက အာသာဘုရင်ရဲ့ အကြောင်းပါ… သူ့ရဲ့ဦးလေး ဗော်တီဂန်က ဘုရင် အူသာပန်ဒရက်ဂွန် လုပ်ကြံပြီး ထီးနန်းသိမ်းပိုက် လိုက်တာကြောင့် အာသာဘုရင်ဟာ သာမာန်အရပ်သားဘဝနဲ့ပဲ ကြီးပြင်းခဲ့ရပါတယ်….
အာသာဟာ ကလေးဘ၀ကတည်းက ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘုရင့်သွေးမှန်းလည်းမသိဘူးပေါ့… ဒီလိုနဲ့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ မှော်ဆရာမပေးခဲ့တဲ့ မှော်ဓားဟာ အလိုလိုပေါ်လာခဲ့ပြီး ကျောက်တုံးထဲကနေ နှုတ်မရ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်… ဒါပေမယ့် အာသာတစ်ယောက်ထဲကသာ မှော်ဓားကိုဆွဲနှုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဗော်တီဂန်ဘုရင်နဲ့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဆိုတာ… စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…
ဒီကားကို ရှားလော့ဟုမ်း ဇာတ်ကားကို အသက်သွင်းခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Guy Ritchie က ရိုက်ကူးထားတာဆိုတော့ အထူးပြောစရာမလိုဘူးလို့ ထင်ပါတယ်နော်…
ဇာတျလမျးကြောရိုးက အင်ျဂလနျသမိုငျးကွောငျးကို ရိုကျကူးထားပွီး အင်ျဂလနျရဲ့ နာမညျအကွီးဆုံး ပုံပွငျတှထေဲက အာသာဘုရငျရဲ့ အကွောငျးပါ… သူ့ရဲ့ဦးလေး ဗျောတီဂနျက ဘုရငျ အူသာပနျဒရကျဂှနျ လုပျကွံပွီး ထီးနနျးသိမျးပိုကျ လိုကျတာကွောငျ့ အာသာဘုရငျဟာ သာမာနျအရပျသားဘဝနဲ့ပဲ ကွီးပွငျးခဲ့ရပါတယျ….
အာသာဟာ ကလေးဘဝကတညျးက ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနရေတော့ ကိုယျ့ကိုယျကို ဘုရငျ့သှေးမှနျးလညျးမသိဘူးပေါ့… ဒီလိုနဲ့ အရှယျရောကျလာတဲ့အခါ မှျောဆရာမပေးခဲ့တဲ့ မှျောဓားဟာ အလိုလိုပျေါလာခဲ့ပွီး ကြောကျတုံးထဲကနေ နှုတျမရ ဖွဈနခေဲ့ပါတယျ… ဒါပမေယျ့ အာသာတဈယောကျထဲကသာ မှျောဓားကိုဆှဲနှုတျနိုငျခဲ့ပွီး ဗျောတီဂနျဘုရငျနဲ့ ဘယျလိုရငျဆိုငျကွမလဲဆိုတာ… စိတျလှုပျရှားဖှယျရာ ကွညျ့ရှုရမှာပဲဖွဈပါတယျ…
ဒီကားကို ရှားလော့ဟုမျး ဇာတျကားကို အသကျသှငျးခဲ့တဲ့ ဒါရိုကျတာ Guy Ritchie က ရိုကျကူးထားတာဆိုတော့ အထူးပွောစရာမလိုဘူးလို့ ထငျပါတယျနျော…
Translated By Zon Myat Noe Swe
Encoded By ZeroKyaw SoeLwin
Userdrive Myanmar 1080P
#King Arthur: Legend of the Sword #Download King Arthur: Legend of the Sword Full Movie #Free King Arthur: Legend of the Sword Download
Room in Rome (2010) DVDRip
Aloha (2015) DVDRip
Just Call Me Nobody (2010) DVDRip
Lady Ninja Kasumi Vol. 1 (2005) 18+
1080p Web-DL 5.1CH, 720p